एप्पलले ल्यायो ६ प्रडक्ट: नयाँ आइप्याड, आइम्याक - ICT Frame Technology
एप्पलले ल्यायो ६ प्रडक्ट: नयाँ आइप्याड, आइम्याक
एप्पलले एकसाथ ल्यायो ६ प्रडक्ट: नयाँ आइप्याड, आइम्याक देखि अपरेटिङ सिस्टमसम्म
अमेरिकी कम्पनी एप्पलको सबैभन्दा ठूलो डेभलपर्स इभेन्ट वल्र्डवाइड डेभलपर्स कन्फ्रेन्स क्यालिफोर्नियाको सन जोसमा चलिरहेको छ । यस समारोहमा एप्पलका प्रमुख कार्यकारी टिम कुक तथा कार्यकारीहरु क्रेज फडरिगी र फिल शिलरले एप्पल वाच, एप्पल टिभी, म्याकबुक तथा आइफोन लगायतका विषयमा विभिन्न घोषणा गरेका छन् । यस सम्मेलनमा एप्पलले गरेका केही महत्वपूर्ण घोषणा यी हुन्:
१. iOS11 : एप्पलले आफ्नो नयाँ अपरेटिङ सिस्टम आइओएस ११ को घोषणा गरेको छ । यस अपरेटिङ सिस्टममा एप ड्रर नामको नयाँ फिचर रहेको छ । जसबाट प्रयोगकर्ताले आफुले चाहेको एप फटाफट भेटाउन सक्नेछन् । साथै यसलाई आइक्लाउडसँग इन्टिग्रेट गरिएको छ । साथै सिरी प्लाटफर्ममा नयाँ भिजुअल इन्टरफेस जोडिएको छ जसमा अनुवादको फिचर पनि रहेको छ । एप्पलका सफ्टवेयर इन्जिनियरिंगका वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्रेग फेडरिगीले आइओएस ११ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यसमा ब्ज्ञण्ह् ँगकष्यल रअउग का साथै न्एग् पनि हुनेछ जसले पूरानो सिपियुको तुलनामा ४० प्रतिशत बढि पर्फमेन्स दिनेछ । यस आइप्याडको ब्याट्री लाइफ १० घण्टाको हुनेछ । यसमा १२ मेगापिक्सेलको क्यामरा सिस्टम हुनेछ, जसले फोर के रिजोलुसन भिडियो खिच्न तथा इडिट गर्न सक्नेछ । फ्रन्ट क्यामरा ७ मेगापिक्सेलको हुनेछ । आइप्याड प्रोका दुई मोडेल हुनेछन्, १०.५ इन्चवाला र १२.९ इन्चवाला । ६४ जिबी स्टोरेज हुने यस आइप्याडमध्ये १०.५ इन्चवालाको मूल्य ६४९ डलर तथा १२.९ इन्चवालाको मूल्य ७९९ डलर हुनेछ ।२. आइप्याड प्रो: १०.५ इन्च डिस्प्लेयुक्त आइप्याड प्रो एप्पलले लञ्च गरेको छ । उत्कृष्ट डिस्प्लेयुक्त यो आइप्याडको डिस्प्लेमा ६०० लष्तक ब्राइटनेस रहेको छ र यसले एचडिआर भिडियो प्लेब्याक सपोर्ट गर्दछ । यसमा एप्पल पेन्सिको पनि उत्कृष्ट ढंगले प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
३. आइम्याक: एप्पलले नयाँ iMac पनि लञ्च गरेको छ । २७ इन्चको फाइभ के रेटिना iMac अब ८ जिबी VRAM को साथमा आउनेछ । यो ल्यापटप भर्चुअल रियालिटी कन्टेन्ट तयार गर्न उपयुक्त हुनेछ । नयाँ आइम्याकमा उत्कृष्ट डिस्प्ले, तिव्र गतिको प्रोसेसर तथा धेरै मेमोरी हुनेछ । यसको मूल्य १०९९ डलरदेखि १७९९ डलरसम्म हुनेछ । यो म्याकबुक पर्यावरणमैत्री भएको दाबी एप्पलको रहेको छ ।
४. आइम्याक प्रो: नयाँ iMac Pro १८ कोर जियोन प्रोसेसरयुक्त हुनेछ । एप्पलका अहिलेसम्मका आइम्याकमध्ये यो सबैभन्दा शक्तिशाली हुनेछ । १६ जिबी VRAM १२८ जिबी इन्टर्नल मेमोरी, ४ टेराबाइट एक्टर्नल मेमोरी हुने यो आइम्याक प्रो आगामी डिसेम्बरदेखि उपलब्ध हुनेछ । यसको सुरुवाती मूल्य ४९९९ डलर हुनेछ ।
५. Home Pod: एप्पलले संगीतप्रेमीहरुका लागि HOM Pod लञ्च गरेको छ । यो एक इन्टेलिजेन्ट स्पीकर हो जसले म्युजिकलार्य आफै एडजस्ट गर्दछ । यसमा ४ इन्चको वूफर तथा A8 चिप रहनेछ । यसको मूल्य ३४९ डलर हुनेछ ।
६. watchOS 4.0: एप्पलले आफ्नो स्मार्टवाच अपरेटिंग सिस्टमको नयाँ भर्सन पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसमा कतिपय नयाँ फिचर थप गरिएको छ । एजेन्सी
२०७४ जेठ २५ गते ८:४७ मा प्रकाशित
Previous Post Previous post: ओप्पो एफथ्री प्लसः प्रिमियम श्रेणीको सेल्फी स्मार्टफोन
Next Post Next post: आइफोनको फिचरः गाडी हाँक्दा एसएमएस नआउने
क्यान सफ्टेकको यो आठौँ संस्करण भाद्र १७ गते देखि २० गते -प्रेस विज्ञप्ती सहित
एचपीले ल्यायो १४ इन्चको एन्ड्रोइड ल्यापटप
सगुन रिटेल इन्भेस्टरका आधारमा अमेरिकाकै दोस्रो ठूलो कम्पनी
Repoter Chiranjibi Adhikari March 20, 2017 March 20, 2017 0
अब युरोप-अमेरिकाकोजस्तै ट्राफिक लाईट नेपालमा
surencool4 May 24, 2016 May 24, 2016